मैले देखेको काङग्रेस‘
मैले अक्षर चिन्दा मेरो घरमा नेपाली काङग्रेस जिन्दाबाद लेखिएको थियो । गाउँमा बिजुली आउने आउन लागेको थियो भर्खरै बिजुलीका पोलहरु गाडिदै थिए हामी दङ् थियौं । म घरमा प्रफुल्लित हुदै सोध्थे, आमा अब उज्यालोमा बस्न पाउने हो ? कस्ले ल्याएको बिजुली ? गाउँले काङग्रेसले बिजुली ल्याइदियो भनेर खुशीयाली मनाउँथे ।
केही घर बाहेक गाउँ नै काङग्रेसको किल्ला थियो । बिजुलीका पोलमा काङग्रेसका स्लोगनहरु थिए, भर्खरै विधालय जानु थालेको म कस्को घर अगाडीको बिजुलीको पोलमा कुन स्लोगन छ सबै भन्दिन्थे । चारतारे झण्डा फरर,मालेको मुटु थरर ! रुखमा भोट प्रतिक्रियाबादीलाई चोट, गाउँगाउँमा हल्ला छ,रुखमा भोट हाल्ने सल्लाह छ लगायतका स्लोगनहरु अझ पनि मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छ ।
राजनीतिक परिवेश भएकोले घरमा कांग्रेसको आउजाउ निकै हुन्थ्यो । हाम्रो घरमा आउने काङग्रेसी जति सबै आफ्नो लाग्थ्यो । कांग्रेसको ४ तारे झण्डा देख्दा मेरो मन गर्वले फुरुङ्ग हुन्थ्यो । टिभीमा काङग्रेसका नेताहरु देख्दा पनि मन खुशीले हर्षित हुन्थ्यो ।
काङग्रेसको समाचार लेख्न पाउँदा दङ्ग हुन्थे । आर्थिक अभियान दैनिकको पृष्ठ ४ मा प्रत्यक आइतबार अन्तर्वार्ता छापिन्थ्यो । मोदनाथ ढकाल दाईसँग अन्तर्वार्ताको लागि जान्थे । अन्तर्वार्ताको लागि म प्राय कांग्रेस नेताहरु नै चुन्दथे । उहाँहरुसँग कुरा गरेपछि मेरो अनुहारमा छाएको खुशियाली देखेर मोद दाईले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “तँ पत्रकार होस क्या, कालो काङग्रेस नबन न” म मुसुक्क हासेर टार्थे ।
त्यसपछि पनि कांङग्रेसका धेरै समाचार लेखे । साथीहरुले राजनीतिक बिटमा पत्रकारिता गरेर अगाडी बढ्न सकिन्दैन भनेर धेरै सम्झाउनु हुन्थ्यो तर पनि मैले हरेस नखाइ निरन्तर यही कामलाई अगाडी बढाए ।
काङग्रेसका समर्थक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बिरोध गरेपछि काङग्रेसले आफ्नो निणर्य सच्यायो तर पनि आफ्नो समर्थकलाई खुशी पार्न भने सकेन ।
नीतिको बहससँगै सो नीतिको प्रयोगमा समेत छलफल गरिनुपर्दछ । वडादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको सांगठनिक संरचनालाई देश संघीय संरचनामा गएको हुनाले सोही अनुरूप पाटीको स्थानीयतहदेखि अधिवेशनको लागि महासमितिबाट विधान परिवर्तन गरी संरचनात्मक परिवर्तन गरिनुपर्दछ । विधि र विधानमा रही निणर्य लिने प्रक्रियालाई पद्धतिको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।
पहिलो पुस्ताबाट कमजोरी देखिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास दोस्रो पुस्तामा पुस्ता हस्तान्तरण गर्दैमा सबै पक्ष सुिध्रन सक्छन् भन्नु गलत बुझाइ हुनेछ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पहिलो पुस्ताबाट राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने रणनीतिक एवं कार्यनीतिक योजनाका साथ आउनु पर्दछ ।
सभापति देउवा कांग्रेसलाई चुनावका पक्षमा उभ्याउन चाहन्छन् । रामचन्द्र पौडेललगायतको समूह ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने मतमा उभिएको छ । पौडेल पक्ष त संयुक्त आन्दोलन गर्न पनि सहमत थियो र छ । दुवै मतलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अहिलेको विषम परिस्थितिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने निणर्यमा पुग्यो । अर्थात्, ‘चुनावमुखी आन्दोलन’ । देउवाले महाधिवेशनअगावै आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान सके एकातिर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना, अर्कातर्फ पुनः पार्टी नेतृत्व आफ्नै हातमा आउने आँकलन गरेरै चुनावका पक्षमा पार्टीलाई लैजान खोजेको देखिन्छ ।
अत ः म अहिले कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन । तर पनि मेरो जिजुबुबा,हजुरबुबा,बुबा आमा लगायत सम्पुणर्को आस्था र बिश्वाससँग जोडिएकोले हुनाले काङग्रेसको हरेक कृयाकलापलाई नियाली रहेको हुन्छु । Ktm Dainik बाट